Oovimba be-BSVUSD-Funda ukurhweba
Ixabiso leBitcoin SV liphinda livavanya iNqanaba leNkxaso ye-113 yeedola, yintoni elandelayo?
Uhlalutyo lweXabiso leBitcoin SV – nge-20 kaDisemba
Ukuba inqanaba lenkxaso ye-133 yeedola libambe, ixabiso linokuthi libuyele kwinqanaba lokumelana ne-$ 148, i-$ 171 kunye ne-$ 194. Ukunyuka koxinzelelo lweebhere kuya kuncipha ixabiso lokudiliza inqanaba lenkxaso ye-113 yeedola ezinokubonisa ixabiso kwi-$ 73 kunye ne-41 yexabiso lexabiso.
Amanqanaba okumelana: $ 148, $ 171, $ 194
Amanqanaba enkxaso: $ 113, $ 73, $ 41
I-BSV / i-USD yexesha elide iTrendar: Qalisa
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-Bitcoin SV i-bearish. Iibhere zaqala kwakhona kwiimarike emva kokubuyiswa kwexabiso elinamandla le-bullish eyenzeka ngoDisemba 06 kwizinga lenkxaso ye-$ 113 ukuya kwizinga lokumelana ne-$ 171. Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, ikhandlela eligubungela i-bearish lenziwe libonisa ukuba iibhere zilawula imarike yeBitcoin SV. Ukuhla kwexabiso ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-113 yeedola.
I-Bitcoin SV, itshathi yemihla ngemihla, nge-20 kaDisemba
I-crypto igcina ukurhweba kwayo ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukunyanzeliswa kwe-bearish. Ezi EMA zimbini ziyagoba ukulandela umkhombandlela wexabiso. Ukuba inqanaba lenkxaso ye-133 yeedola libambe, ixabiso linokuthi libuyele kwinqanaba lokumelana ne-$ 148, i-$ 171 kunye ne-$ 194. Ukunyuka koxinzelelo lweebhere kuya kuncipha ixabiso lokudiliza inqanaba lenkxaso ye-113 yeedola ezinokubonisa ixabiso kwi-$ 73 kunye ne-41 yexabiso lexabiso.
I-BSV / i-USD yeXesha eliPhakathi lokuHamba: UkuHamba
I-Bitcoin SV ikwintshukumo ejikelezayo kwimbonakalo yexesha eliphakathi. Iibhere zichasa iinkunzi ze-171 kwizinga lokumelana noDisemba 07. Ukuhla kwexabiso kunye nokuvavanya inqanaba lenkxaso ye-113 yeedola. Ixabiso okwangoku lidibanisa ngaphakathi kwinqanaba lokumelana ne-$ 148 kunye ne-$ 113 yenqanaba lokuxhasa.
I-Bitcoin SV itshathi yeyure ezi-4, nge-20 kaDisemba
Ixabiso lirhweba malunga namaxesha ali-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuba amandla eebhere kunye neenkunzi ziyalingana. Isalathiso samandla ahambelanayo 14 kwinqanaba le-40 elibonisa uphawu lwe-bearish.
tags I-BSVUSD, Marketing, Uhlalutyo Technical
Uhlalutyo lweXabiso leBitcoin SV – nge-13 kaDisemba
Ukonyuka okuthe kratya koxinzelelo lweebhere kuya kunciphisa ixabiso lokwephula inqanaba lenkxaso le- $ 113 elinokuthi libeke ixabiso kwi-73 kunye ne-41 lexabiso lexabiso lamaxabiso. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 133 liphethe, ixabiso linokunyuka liye kwinqanaba lokumelana ne- $ 148, $ 171 kunye ne- $ 194.
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-Bitcoin SV i-bearish. Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, ingqekembe yayikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yemihla ngemihla. Inqanaba lokumelana ne-$ 171 lihlolwe xa ixabiso lihoxisiwe ukusuka kwinqanaba lenkxaso ye-113 yeedola. Iibhere zichasile ukunyuka kwexabiso kunye nekhandlela elide lemihla ngemihla lenziwe. Landela le meko kukubunjwa kwekhandlela le-bearish engulfing eliye labangela ukuba kubekho i-bearish trend. Ixabiso ngoku lijongene nenqanaba lexabiso le-113 yeedola.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BSVUSD, nge-13 kaDisemba
Ii-EMA ezimbini ziyagoba ukulandela ulwalathiso lwexabiso. I-crypto iyaqhubeka nokuthengisa kwayo ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa amandla e-bearish. Ukonyuka okuthe kratya koxinzelelo lweebhere kuya kunciphisa ixabiso lokwephula inqanaba lenkxaso le- $ 113 elinokuthi libonakalise ixabiso liye kuthi ga kwixabiso leedola ezili-73 kunye nele-41. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso le- $ 133 liphethe, ixabiso linokunyuka liye kwinqanaba lokumelana ne- $ 148, $ 171 kunye ne- $ 194.
I-BSV / i-USD yeXesha leXesha eliPhakathi: Qalisa
I-Bitcoin SV ikwintshukumo ye-bearish kwimbono yexesha eliphakathi. Iibhere ekugqibeleni zilawula imarike yeBitcoin SV. Ukunyuka kweebhere ukunyuka kunye nokuhla kwexabiso ukudiliza inqanaba lenkxaso kwi-148 yeedola. Ixabiso liyancipha ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-133 yeedola.
Itshathi ye-BSVUSD yeeyure ezi-4, nge-13 kaDisemba
Ixabiso lithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuba iibhere zilawula imarike. Isalathiso samandla esihambelanayo se-14 sikwimigangatho ye-40 ebonisa uphawu lwe-bearish.
Ixabiso le-Bitcoin SV: Iibhere zilawula ngaphezu kweenkunzi, iNqanaba le-113 yeedola linokufikelelwa
Uhlalutyo lwexabiso le-Bitcoin SV-Novemba 29
Ukunyuka okungaphezulu koxinzelelo lweebhere kuya kuncipha ixabiso lokudiliza inqanaba lenkxaso ye-148 yeedola ezinokubonisa ixabiso kwi-$ 113 kunye ne-$ 73 amanqanaba exabiso. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso ye-148 yeedola libamba, ixabiso linganyuka ngokubhekiselele kwinqanaba lokumelana ne-$ 171, i-$ 194 kunye ne-$ 206.
Amanqanaba okumelana: $ 171, $ 194, $ 206
Amanqanaba enkxaso: $ 148, $ 113, $ 73
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-Bitcoin SV i-bearish. Kwiveki ephelileyo, ingqekembe yayikwintshukumo ejikelezayo kwitshathi yemihla ngemihla. Inqanaba lokuchasa kwi-194 yeedola libambe kwaye i-bullish ye-bullish akwanelanga ukutyhala ixabiso ngaphezu kwayo. Inqanaba lenkxaso kwi-171 yeedola lihlala liqinile kwiibhere. Ngomhla we-16 kaNovemba, iibhere zandisa umfutho wazo kwaye zityhala ixabiso elingaphantsi kwinqanaba lenkxaso ye-171 yeedola kwaye lizama ukudiliza inqanaba lenkxaso ye-148.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BSVUSD, nge-29 kaNovemba
Ezi EMA zimbini ziyagoba ukulandela umkhombandlela wexabiso. I-crypto iyaqhubeka nokurhweba ngaphantsi kwamaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukunyuka kwe-bearish. Ukunyuka okungaphezulu koxinzelelo lweebhere kuya kuncipha ixabiso lokudiliza inqanaba lenkxaso ye-148 yeedola ezinokubonisa ixabiso kwi-$ 113 kunye ne-$ 73 amanqanaba exabiso. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso ye-148 yeedola libamba, ixabiso linganyuka ngokubhekiselele kwinqanaba lokumelana ne-$ 171, i-$ 194 kunye ne-$ 206.
I-Bitcoin SV ikwintshukumo ye-bearish kwimbonakalo yexesha eliphakathi. Iibhere ekugqibeleni zilawula imarike yeBitcoin SV. Umfutho weebhere uyonyuka kunye nokuhla kwexabiso ukonyusa inqanaba lenkxaso kwi-171 yeedola. Ixabiso liyancipha kwinqanaba lenkxaso le- $ 148.
BSVUSD iiyure ezi-4 char, Novemba 29
Ixabiso lithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuba iibhere zilawula intengiso. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 lingaphantsi kwamanqanaba angama-50 abonisa umqondiso we-bearish.
Ixabiso le-Bitcoin SV (BSVUSD): Ngaba kukho uxinzelelo olwaneleyo lwe-Bearish yokuphula iNqanaba le-148 yeedola?
Uhlalutyo lwexabiso le-Bitcoin SV-Novemba 22
Ukuqhawuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 194 liya kwandisa ixabiso kwi-$ 233 kunye namanqanaba e-$ 266. Ngendlela efanayo, ukuphuka kwinqanaba le-$ 148 kuya kunciphisa ixabiso kwi-$ 112 kunye ne-$ 73 amanqanaba exabiso.
Amanqanaba okumelana: $ 194, $ 233, $ 266
Amanqanaba enkxaso: $ 148, $ 112, $ 73
I-BSV / i-USD yexesha elide: Ukuma
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-Bitcoin SV ikwintshukumo ejikelezayo. Iibhere zihlala zikhusela inqanaba lokumelana ne-194 yeedola. Oku kuqatshelwe ngokuqulunqwa kwekhandlela elinamandla le-bearish kwinqanaba le-$ 194. Inqanaba lenkxaso ye-148 yeedola liye lavavanywa kwimarike ye-Bitcoin SV ngoncedo loxinzelelo lweebhere ngoNovemba 18. Ixabiso latsalwa umva ukuze liphinde lihlole amanqanaba okumelana namandla. Okwangoku le ngqekembe ibopheleleke ngaphakathi kwinqanaba lokumelana ne-$ 194 kunye nenqanaba lenkxaso ye-$ 148.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BSVUSD, nge-22 kaNovemba
I-Bitcoin SV ithengisa ngaphantsi kwamanqanaba amabini okumelana nokutshintsha; irhweba ngaphantsi kwamaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwitshathi yemihla ngemihla, kwakhona i-EMA ehamba ngokukhawuleza inqumla i-EMA ephantsi njengesibonakaliso sokunyuka kwe-bearish momentum. Ukuqhawuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 194 liya kwandisa ixabiso kwi-$ 233 kunye namanqanaba e-$ 266. Ngendlela efanayo, ukuphuka kwinqanaba le-$ 148 kuya kunciphisa ixabiso kwi-$ 112 kunye ne-$ 73 amanqanaba exabiso.
I-Bitcoin SV ikwintshukumo ejikelezayo kwitshathi yeyure ye-4. Inqanaba lokumelana ne-$ 194 libambe ixabiso ukususela ngo-Oktobha 08. Umfutho weBulls waba buthathaka ngokukhawuleza wavavanya izinga lokumelana ne-$ 194. Ayikwazanga ukwaphula inqanaba elikhankanywe. I-Crypto yabuyisela umva, yavavanya inqanaba lenkxaso ye-148 yeedola kodwa ayikwazi ukuliqhekeza phantsi. Ixabiso lihamba phakathi koluhlu olukhankanywe.
I-Bitcoin SV itshathi yeyure ezi-4, nge-22 kaNovemba
Ixabiso lirhweba malunga namaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwaye elokuqala liwela emva kwexesha njengophawu lwentengiso eyahlukahlukeneyo. Isalathiso samandla ahambelanayo ixesha le-14 likumanqanaba angama-40 abonisa uphawu lwe-bearish.
Ixabiso le-Bitcoin SV: Iinkunzi zeenkomo zenza uxinzelelo lokuqhawula kwiNqanaba le-194 yeedola?
Uhlalutyo lwexabiso le-Bitcoin SV-Novemba 11
Ukunyuka koxinzelelo lweenkunzi zeenkomo ukuphula inqanaba lokumelana ne-$ 194 kunokunyusa ixabiso kwinqanaba lokumelana ne-$ 233 kunye ne-$ 266. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne-194 yeedola likhuselwe ngamabhere, ixabiso linokuthi liphule inqanaba le-$ 148 kwaye linciphise ngakumbi kwi-$ 112 kunye namanqanaba e-$ 73.
I-BSV / i-USD yexesha elide iTrend: Bullish
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-Bitcoin SV is bullish. Inqanaba lokumelana ne-194 yeedola liye lavavanywa kwimarike yeBitcoin SV ngoncedo loxinzelelo lweenkunzi. Eli lixesha lesibini inqanaba livavanywa; ixesha lokuqala kwaba ngoSeptemba 06, irholile umva kwakhona inqanaba inkxaso $148. Kwisihlandlo sesibini yayiyi-09 kaNovemba, yabuya umva. Okwangoku iinkunzi zibuyela emarikeni.
Itshathi yosuku lwe-BSVUSD, ngoNovemba 15
I-Bitcoin SV iphule ngaphezu kwamanqanaba amabini okumelana nokutshintsha; irhweba ngaphezu kwamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwitshathi yemihla ngemihla, kwakhona i-EMA ehamba ngokukhawuleza inqumla i-EMA ecothayo njengesalathiso sokunyuka kwesantya se-bullish. Ukunyuka koxinzelelo lweenkunzi zeenkomo zokuqhawula inqanaba lokumelana ne-$ 194 kunokunyusa ixabiso kwinqanaba lokumelana ne-$ 233 kunye ne-$ 266. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne-194 yeedola likhuselwe ngamabhere, ixabiso linokuthi liphule inqanaba le-$ 148 kwaye linciphise ngakumbi kwi-$ 112 kunye namanqanaba e-$ 73.
I-BSV / i-USD yeXesha eliPhakathi lokuHamba: Bullish
I-Bitcoin SV ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeyure ye-4. Umfutho weBulls waba buthathaka ngokukhawuleza wavavanya inqanaba lokumelana ne-194 yeedola ngoNovemba 09. Ayikwazanga ukuqhekeza inqanaba elikhankanywe. I-Crypto yatsalwa ngasemva ngaphantsi kwenqanaba lenkxaso eguquguqukayo. Namhlanje, kubonakala ngathi iinkunzi zenkomo zizama ukongamela imarike yeBSV.
Itshathi ye-BSVUSD yeeyure ezi-4, ngoNovemba 15
Ixabiso lirhweba ngaphezu kwamaxesha angama-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwaye owokuqala uwela kamva njengophawu lwentengiso yentengiso. Isalathiso samandla ahambelanayo ixesha le-14 likumanqanaba angama-60 abonisa isignali ye-bullish.
Ixabiso leBitcoin SV: Ngaba kuya kubakho ukuqhambuka kweBullish kwiNqanaba le-186 yeedola?
Uhlalutyo lwexabiso le-Bitcoin SV-Novemba 08
Ukunyuka okungaphezulu koxinzelelo lweenkunzi zenkomo kunokukhokelela ekuqhekekeni kwinqanaba lokumelana ne-$ 186, elinokwandisa kwi-$ 233 kunye ne-$ 266. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne-186 yeedola libambe, ixabiso linokudiliza inqanaba le-148 yeedola kwaye lingancipha ngakumbi ukuya kwi-112 yeedola kunye ne-73 yenqanaba.
Amanqanaba okumelana: $ 186, $ 233, $ 266
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-Bitcoin SV is bullish. Uxinzelelo lweenkunzi zenkomo luye lwatyhalela ingqekembe ukuvavanya umgangatho wokumelana ne-$ 186 ngo-Oktobha 07. Inqanaba lokumelana nokuxhatshazwa kweenkunzi zeenkomo kunye neqhosha lemali lihlehliselwe umva ukubuyisela inqanaba lenkxaso ye-$ 140 ngo-Oktobha 27. Kwiveki ephelileyo, iinkunzi zeenkomo zifumene. umfutho othe kratya wokutyhala phezulu ingqekembe kwaye ngoku iya kwinqanaba lokumelana ne-186 yeedola.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BSVUSD, nge-08 kaNovemba
I-Bitcoin SV iphula ngaphezu kwamanqanaba amabini okumelana nokutshintsha; irhweba ngaphezu kwamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwitshathi yemihla ngemihla, kwakhona i-EMA ehamba ngokukhawuleza inqumla i-EMA ecothayo njengesalathiso sokunyuka kwesantya se-bullish. Ukunyuka okungaphezulu koxinzelelo lweenkunzi zenkomo kunokukhokelela ekuqhekekeni kwinqanaba lokumelana ne-$ 186, elinokwandisa kwi-$ 233 kunye ne-$ 266. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne-186 yeedola libambe, ixabiso linokudiliza inqanaba le-148 yeedola kwaye lingancipha ngakumbi ukuya kwi-112 yeedola kunye ne-73 yenqanaba.
I-Bitcoin SV ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeyure ye-4. Iinkunzi zeenkomo zilahlekelwa ngamandla xa zivavanya izinga lokumelana ne-$ 186 ngo-Oktobha 10. Ayikwazanga ukuphula inqanaba elikhankanywe nje. I-Crypto iqala intshukumo yokuhamba. Iibhere ziphumelele kwaye ixabiso libuyele kwinqanaba lenkxaso ye-$ 148 ngo-Oktobha 27. Okwangoku, ixabiso liyanda kwinqanaba lokumelana ne-$ 186.
Itshathi ye-BSVUSD yeeyure ezi-4, ngoNovemba 08
Ixabiso lithengisa ngamaxesha angama-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwaye owokuqala uzama ukuwela kamva njengophawu lwentengiso yentengiso. Isalathiso samandla ahambelanayo ixesha le-14 likumanqanaba angama-60 abonisa isignali ye-bullish.
Ixabiso leBitcoin SV lilungiselela ukuQhutywa
Uhlalutyo lwexabiso le-Bitcoin SV-Novemba 01
Xa kukho ukuqhawuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 193, ixabiso linganyuka ukuvavanya i-$ 233 kunye ne-$ 266. Ngakolunye uhlangothi, ukuchithwa kwenqanaba le-$ 148 kunokunciphisa ixabiso kwi-$ 112 kunye namanqanaba e-$ 73.
Amanqanaba okumelana: $ 193, $ 233, $ 266
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-Bitcoin SV iyahluka. Ingqekembe iseza kugqabhuka intshukumo ejikelezayo njengoko iinkunzi zenkomo kunye nomfutho weebhere zibonakala zilingana. I-Bitcoin SV ingaphakathi kolu luhlu ngaphezu kweeveki ezimbini. Kwiveki ephelileyo, kwakungekho ntshukumo ebalulekileyo kwimarike ye-BSVUSD. Iibhere zazizama ukulawula imarike ngo-Oktobha 27. Iinkunzi zeenkomo zaphazamisa iibhere ukuze zithintele i-bearish breakout.
Itshathi yosuku lwe-BSVUSD, ngoNovemba 01
I-Bitcoin SV ithengisa ngaphantsi kwamanqanaba amabini enkxaso ashukumisayo; irhweba ngaphantsi kwamaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwitshathi yemihla ngemihla, kwakhona i-EMA ehamba ngokukhawuleza ihlulwe ngokuyinxenye kwi-EMA ehamba kancinci njengesalathiso sokunyuka kokuguquguquka. Xa kukho ukuqhawuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 193, ixabiso linganyuka ukuvavanya i-$ 233 kunye ne-$ 266. Ngakolunye uhlangothi, ukuchithwa kwenqanaba le-$ 148 kunokunciphisa ixabiso kwi-$ 112 kunye namanqanaba e-$ 73.
I-Bitcoin SV ikwintshukumo ejikelezayo kwitshathi yeyure ye-4. I-Crypto ibotshelelwe kwizinga lokumelana ne-$ 193 kunye nenqanaba lenkxaso ye-148 yeedola ngaphezu kweeveki ezimbini. Iibhere zenza uxinzelelo olungakumbi kwiveki ephelileyo ngethemba kubathengisi ukuba kuya kubakho ukuqhambuka kwe-bearish kodwa iinkunzi zenkomo zichasile ukuhamba kweebhere. Ukuqiniswa kwexabiso kuyaqhubeka de kubekho ukuqhawuka.
Itshathi ye-BSVUSD yeeyure ezi-4, ngoNovemba 01
Ezi EMA zimbini zinxibelelene enye kwenye kwaye ixabiso lihamba phezu kwamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lokuhlanganisa imakethi. Isalathiso samandla ahambelanayo ixesha le-14 likumanqanaba angama-50 abonisa ulwalathiso oluthile lwesignali.
Ixabiso le-Bitcoin SV liyafudumala ukuya kuthi ga kwinqanaba le-193 yeedola
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Bitcoin SV-Okthobha 11
Ukonyuka okuthe kratya kubathengi 'kunokuphelisa inqanaba lokumelana kwinqanaba le-193 kwaye yonyuse ixabiso liye kuthi ga kwi-233 kunye ne-266 yeedola kwinqanaba lamaxabiso. Ukungakwazi ukwahlula inqanaba lexabiso le- $ 193 kungakhokelela kwintengiso eyahlukeneyo okanye ukwehla kwexabiso ngokwamanqanaba enkxaso ye- $ 147, $ 101 kunye ne- $ 73.
Amanqanaba enkxaso: $ 147, $ 101, $ 73
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-Bitcoin SV inyusa. Iibhere bezilawula imarike yeBitcoin SV kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Uxinzelelo lwabathengisi aluphumelelanga kwinqanaba lenkxaso leedola ezili-101 kunye nemodeli yekhandlela yokubuyisela kwimeko yesiqhelo ekhulayo ebizwa ngokuba yi-bullish engulfing. Oku kubangele ukunyuka okuphezulu kwengqekembe. Iyonyusa kwaye yaphule inqanaba le-148 yeedola ngoku ejolise kwinqanaba lokumelana ne-193 yeedola.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BSVUSD, nge-Okthobha 11
I-Bitcoin SV igcina urhwebo lwayo ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwitshathi yemihla ngemihla ngelixa i-EMA ehamba ngokukhawuleza ihlala ngaphezulu kwe-EMA ecothayo njengomboniso wentshukumo. Ukonyuka okuthe kratya kubathengi 'kunokuphelisa inqanaba lokumelana kwinqanaba le-193 kwaye yonyuse ixabiso liye kuthi ga kwi-233 kunye ne-266 yeedola kwinqanaba lamaxabiso. Ukungakwazi ukwahlula inqanaba lexabiso le- $ 193 kungakhokelela kwintengiso eyahlukeneyo okanye ukwehla kwexabiso ngokwamanqanaba enkxaso ye- $ 147, $ 101 kunye ne- $ 73. Nangona kunjalo, isalathiso samandla esihlobo (ixesha le-14) lingaphezulu kwamanqanaba angama-60 kunye nomgca wesiginali olatha phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
I-Bitcoin SV inyusa kwitshathi yeeyure ezi-4. I-Crypto yavavanya inqanaba lenkxaso le- $ 101 ngoSeptemba 26. Iinkunzi zeenkomo zazikhusela inqanaba elikhankanyiweyo kunye nexabiso elirhoxisiweyo. Iinkunzi zithatha indawo yentengiso yeBitcoin SV kwaye inyuka iye kwinqanaba lokumelana ne-190 leedola. Kule veki iphelileyo, ingqekembe ibiphantsi kolawulo lwabathengi. Kukho umkhwa wexabiso lokuqhubeka ukonyuka ngaphezulu kwenqanaba le- $ 190.
Itshathi ye-BSVUSD 4 yeyure, Okthobha 11
Ezi EMA zimbini zisondelelene kwaye ixabiso liyarhweba ngeenxa zonke zexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 ee-EMA. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 ikumanqanaba angama-60 abonisa uphawu lokuthenga.
Ixabiso le-SV ye-SV inokuqhekeza inqanaba lokumelana ne- $ 148
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Bitcoin SV-Okthobha 04
Xa iinkunzi zeenkomo zonyusa uxinzelelo lwazo kwaye inqanaba lokumelana ne-148 yeedola liye laphuka, i-193 kunye ne-233 yeedola zokuchasana zinokuvavanywa. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 148 ibambe, ukushukuma okuqhubekayo kunokuqhubeka ngaphakathi kwe- $ 148 kunye ne- $ 101 yamanqanaba amaxabiso.
Amanqanaba okumelana: $ 148, $ 193, $ 233
Amanqanaba enkxaso: $ 101, $ 73, $ 41
I-Bitcoin SV i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Abathengisi babambelela kwimarike yeBitcoin SV emva kokwenziwa kwetshathi ebizwa ngokuba yinkwenkwezi yangokuhlwa kwitshathi yemihla ngemihla kwinqanaba lokumelana ne- $ 193. Ixabiso lehliswe laya kwi- $ 101 kwiveki ephelileyo. Ibuyela umva ukuvavanya inqanaba lokumelana ne- $ 148. Kukho ukutyekela kweenkunzi zeenkomo ukuthatha indawo yentengiso.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BSVUSD, nge-Okthobha 04
I-Bitcoin SV ithengisa phakathi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwitshathi yemihla ngemihla ngelixa i-EMA ehamba ngokukhawuleza ihlala ingezantsi kwe-EMA ehamba kancinci njenge-bearish movement ebonisa. Xa iinkunzi zeenkomo zonyusa uxinzelelo lwazo kwaye inqanaba lokumelana ne-148 yeedola liye laphuka, i-193 kunye ne-233 yeedola zokuchasana zinokuvavanywa. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 148 ibambe, ukushukuma okuqhubekayo kunokuqhubeka ngaphakathi kwe- $ 148 kunye ne- $ 101 yamanqanaba amaxabiso. Nangona kunjalo, isalathiso samandla esihlobo (ixesha le-14) likumanqanaba angama-50 kunye nomgca wesiginali olatha ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
I-Bitcoin SV isukela kwitshathi yeeyure ezi-4. Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, i-Crypto yaqhekeka kumanyano lokudibanisa kwinqanaba lexabiso leedola ezili-148. Abathengisi balawula imarike kwaye batyhala ixabiso ukuya kwinqanaba lokuxhasa le- $ 148. Kwiveki ephelileyo, ixabiso lingene kwinqanaba lenkxaso ye- $ 148 kwicala eliphantsi kwaye liqala ngokuhamba okuphakathi kwe- $ 148 kunye ne- $ 101 kwinqanaba.
Itshathi ye-BSVUSD yeeyure ezi-4, Okthobha 04
Ezi EMA zimbini zisondelelene kwaye ixabiso liyarhweba ngaphezulu nangamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 ee-EMA. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikumanqanaba angama-60 abonisa uphawu lokuthenga.
Ixabiso leBitcoin SV liyaqhekeka kwinqanaba leNkxaso yeedola ezili-147, linokunciphisa ukuya kwinqanaba le- $ 101
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Bitcoin SV-Septemba 27
Ukonyuka kwesantya sabathengisi kunokwaphula inqanaba lenkxaso kwinqanaba leedola ezili-101 kunye nokunciphisa ixabiso ukuya kuthi ga kumaxabiso angama- $ 73 kunye nama- $ 41 kwinqanaba lamaxabiso. Ukusilela ukwaphula kwinqanaba lexabiso lama- $ 101 kunokubangela ukonyuka kwamaxabiso kumanqanaba oxhathiso lwe- $ 141, $ 193 kunye ne- $ 233.
Amanqanaba okumelana: $ 147, $ 193, $ 233
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-Bitcoin SV i-bearish. I-Bitcoin SV ivelise iphethini yetshathi ebizwa ngokuba yinkwenkwezi yangokuhlwa kwitshathi yemihla ngemihla kwinqanaba lokumelana ne- $ 193. I-crypto ilandela umkhombandlela wetshathi ye-bearish. Kwenziwe ikhandlela elikhulu lemihla ngemihla elihambisa amakhandlela angaphambili. Inqanaba lenkxaso le- $ 143 lavavanywa kwaye laphuka. Okwangoku iyancipha ukuya kwinqanaba lokuxhasa le- $ 101.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BSVUSD, septemba 27
I-Bitcoin SV ithengisa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwitshathi yemihla ngemihla ngelixa i-EMA ehamba ngokukhawuleza ihlala ingezantsi kwe-EMA ehamba kancinci njenge-bearish movement ebonisa. Ukonyuka kwesantya sabathengisi kunokwaphula inqanaba lenkxaso kwinqanaba leedola ezili-101 kunye nokunciphisa ixabiso ukuya kuthi ga kumaxabiso angama- $ 73 kunye nama- $ 41 kwinqanaba lamaxabiso. Ukusilela ukwaphula kwinqanaba lexabiso lama- $ 101 kunokubangela ukonyuka kwamaxabiso kumanqanaba oxhathiso lwe- $ 141, $ 193 kunye ne- $ 233. Nangona kunjalo, isalathiso samandla esihlobo (ixesha le-14) lingaphantsi kwamanqanaba angama-40 kunye nomgca womqondiso okhomba ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa.
I-Bitcoin SV i-bearish kwitshathi yeeyure ezi-4. I-Crypto iqhume kumanyano lokudibanisa olwenzeke kwinqanaba leedola ezili-148 kwiveki ephelileyo. Xa inqanaba lokuchasana le- $ 193 lavavanywa yi-Bitcoin SV kwaye lahla kwinqanaba. Abathengisi balawula intengiso kwaye balityhala ixabiso ukuya kwinqanaba lokuxhasa le- $ 148. Okwangoku, ixabiso lithengisa ngaphantsi kwenqanaba le-4148 ukuya kwinqanaba lenkxaso le- $ 101.
Itshathi ye-BSVUSD 4 yeyure, ngoSeptemba 27
Ii-EMA ezimbini zahlulwe enye kwenye kwaye ixabiso lithengisa ngaphantsi kwamaxesha ama-9 ama-EMA kunye nama-21 amaxesha e-EMA. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikumanqanaba angama-40 abonisa uphawu lokuthenga.